တခါတုနျးက အသကျအရှယျ အိုမငျးလှပွီဖွဈတဲ့ အဖှားအိုတဦး ရှိပါသတဲ့။ အဖှားအိုဟာ တသကျတာလုံးမှာ စိတျထားဖွူစငျစှာနဲ့ သီလခိုငျမွဲစှာ အသကျရှငျ နထေိုငျခဲ့သူ ဖွဈတယျ။ အဲဒီလိုနဲ့ တရကျမှာတော့ အဖှားအိုဟာ သအေံ့မူးမူး အခြိနျအခါကို ရောကျရှိလာခဲ့ပါသတဲ့။
အဲဒီလို အဖှားအို သအေံ့မူးမူး ဖွဈနဆေဲ အခြိနျအခါမှာ ရုတျတရကျ ဆိုသလိုပဲ သမေငျးတမနျ နတျသားဟာ အဖှားအိုအနီးမှာ ဘှားခနဲ ပျေါလာပါသတဲ့။ ပွီးတဲ့အခါ အဖှားအိုကို ကွငျနာစှာကွညျ့ပွီး ဒီလိုပွောခဲ့တယျ။
"အဘှား၊ အဘှားဟာ တသကျလုံး ကောငျးမှုကုသိုလျတှေ နဲ့သာ ယဉျပါးခဲ့သူ ဖွဈတယျ။ ဒါကွောငျ့ အဖှား တမလှနျကို မကူးပွောငျးခငျစပျကွားမှာ ဒီဘဝအတှကျ နောကျဆုံး ဖွဈခငျြတဲ့ ဆန်ဒကို ပွောပါ။ ဘာမဆို ကြှနျုပျဖွညျ့ဆညျးပေးပါ့မယျ"
အဲဒီစကားကို ကွားတဲ့အခါ အဖှားအိုက "ဒီလိုဆိုလညျး မောငျရငျလေးရယျ အဖှားကို ကောငျးကငျဘုံနဲ့၊ ငရဲဘုံကို လိုကျပွစမျးပါ၊ တရားထဲမှာသာ နာဖူးပမေယျ့ အပွငျမှာ မွငျဖူးခငျြလို့ပါ" လို့ ပွနျပွောလိုကျ ပါသတဲ့။ အဲဒီလိုနဲ့ သမေငျးတမနျ နတျသားဟာ အဖှားအိုကို ချေါဆောငျပွီး ငရဲဘုံကို ဦးစှာ လာခဲ့ပါသတဲ့။
ငရဲဘုံကို အဖှားအို ရောကျတဲ့အခါ သမေငျးတမနျ နတျသားဟာ အဖှားအိုကို ခနျးမကွီးတခုကို ချေါဆောငျလာခဲ့တယျ။ အဲဒီခနျးမကွီးမှာ ကွီးမားတဲ့ စားပှဲရှညျကွီး တလုံးကို ခထြားခဲ့တယျ။ အဲဒီစားပှဲပျေါမှာတော့ အမြိုးမြိုးသော စားသောကျဖှယျရာတှေ၊ အဖြျောယမကာတှနေဲ့ပွညျ့နှကျနေ ခဲ့တယျ။
စားပှဲ ပတျခြာလညျမှာတော့ ပိနျလှီနတေဲ့ ယောကျြား၊ မိနျးမ၊ ကလေး၊ လူကွီး အရှယျစုံဟာ စားသောကျဖို့အတှကျ အငမျးမရ ဖွဈနကွေတာကို တှလေို့ကျရတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး သူတို့ရဲ့လကျတှေ နရောမှာ လကျခြောငျးတှအေစား လူတရပျလောကျ နီးနီး ရှညျလြားလှတဲ့ ဇှနျးတံတှေ ပေါကျနကွေတယျ။
သူတို့တှဟော စားသောကျဖှယျရာတှကေို ဇှနျးနဲ့ခပျလို့ ရပမေယျ ရှညျလြားလှတဲ့ ဇှနျးကွောငျ့ သူတို့ရဲ့ ပါးစပျကို ရောကျရှိဖို့ မဖွဈနိုငျကိုလညျး အဖှားအိုက တှလေို့ကျရတယျ။ လူတှဟော အစားအသောကျကို မွငျနရေပမေယျ့ ငတျမှတျခွငျးနဲ့သာ အဆုံးသတျ ငိုညညျးနကွေ ပွနျတယျ။
အဖှားအိုဟာ ငရဲဘုံရဲ့ ငတျမှတျဆငျးရဲခွငျးကို မွငျတှပွေီ့းတဲ့အခါ "ကောငျးကငျဘုံကို လိုကျပို့ပါတော့ သမေငျးတမနျနတျသား" လို့ ပွောလိုကျတယျ။ အဲဒီလိုနဲ့ သမေငျးတမနျနတျသားဟာ အဖှားအိုကို ချေါဆောငျပွီး ကောငျးကငျဘုံကို လိုကျလံ ပွသပွနျတယျ။
အဖှားအိုက "ကောငျးကငျဘုံမှာတော့ ဇှနျးလကျတံတှေ ပေါကျမနလေောကျပါဘူးနျော" လို့ မေးမွနျးခဲ့ ပွနျတယျ။ "ရောကျတဲ့အခါ ကွညျ့လိုကျပေါ့အဘှားရယျ" လို့ သမေငျးတမနျ နတျသားက ပွနျပွောခဲ့တယျ။
အဲဒီလိုနဲ့ အဘှားအိုဟာ ကောငျးကငျဘုံရဲ့ စားသောကျခနျးမထဲကို ရောကျလာခဲ့ပွနျတယျ။ ကောငျးကငျဘုံ စားသောကျခနျးထဲ မှာလညျး ငရဲပွညျတုနျးကလိုပဲ ခမျးနားတဲ့ ညစာစားပှဲကွီး ခငျးကငျြးထား ပွနျတယျ။ သူတို့ဟာ လကျခြောငျးတှေ ရှိနကွေပမေယျ့လညျး ဇှနျးအရှညျကွီးတှကေို ကိုငျဆောငျထား ကွတယျ။
ဒါပမေယျ့ ခွားနားတာ တခုကို အဖှားအို တှလေို့ကျရတယျ။ အဲဒါကတော့ ဇှနျးလကျတံ အရှညျကွီးတှေ နဲ့ တယောကျနဲ့ တယောကျ အပွနျအလှနျ ခှံ့ကြှေးနကွေတာပဲ ဖွဈတယျ။ သူတို့ဟာ စားသောကျရငျး၊ ရယျမောရငျး၊ သီခငျြးဆိုရငျး ပြျောရှငျကွညျနူး နကွေတာပဲ ဖွဈတယျ။
အဖှားအိုဟာ အဲဒီမွငျကှငျးကို ကွညျ့ရှုပွီး ဒီလိုပွောခဲ့တယျ။ "အိုး၊ သူတို့ဟာ တယောကျနဲ့တယောကျ ကြှေးမှေးတာကို ကောငျးကောငျးလလေ့ာ တတျမွောကျနပွေီပဲ၊ ကောငျးကငျဘုံနဲ့ ငရဲဘုံရဲ့ကှာခွားခကျြက တဦးနဲ့တဦး အပွနျအလှနျ ကွညျ့ရှု စောငျ့ရှောကျခွငျးပဲ"
နောကျတနေ့ မနကျမှာတော့ အဖှားအိုဟာ ကှယျလှနျအနိစ်စ ရောကျခဲ့တယျ။ သူဟာ အကွငျနာတရားရဲ့အရေးကွီးပုံကို သဘောပေါကျနားလညျသှားတာမို့ သူ့ရဲ့သှားရာလမျးဟာ ကောငျးကငျဘုံ ဖွဈမှာတော့ သခြောနခေဲ့တယျ။
ဒီပုံပွငျလေးက ကြှနျတျောတို့ကို ပွောပွထားတာတှေ ရှိပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဟာ အခြိနျအကနျ့အသတျနဲ့သာ ရှငျသနျခှငျ့ ရကွတဲ့ လူသားတှပေဲ ဖွဈတယျ။ အဲဒီလို အခြိနျအကနျ့အသတျနဲ့ ရှငျသနျနကွေရတဲ့ ဘဝမှာပဲ ရှငျနလေကျြနဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတှကွေောငျ့ ရှညျလြားတဲ့ ဇှနျးလကျတံတှေ ပေါကျနကွေသူတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
ကိုယျ့ရဲ့ လိုအငျဆန်ဒ အလှမျး ကယျြလာလလေေ လောဘဇှနျးတံဟာ ရှညျလြားလလေေ ဖွဈနကွေပွနျတယျ။ အဲဒီလို ဇှနျးတံဟာ ရှညျလြားပမေယျ့ ကိုယျ့ရဲ့အလိုပွညျ့ခွငျး ခံတှငျးပေါကျကို ဘယျသောအခါမှ ရောကျမှာမဟုတျဘူး ဆိုတာကို ပုံပွငျလေးက ပွောပွနပေါတယျ။
ငရဲဘုံက လူတှဟော ဇှနျးလကျတံတှနေဲ့ အခငျြးခငျြး ခှံ့ကြှေးရငျ ရနိုငျပါလကျြ ကိုယျစားဖို့ကိုသာ အာရုံစိုကျ ကွိုးပမျးနကွေတဲ့ အတှကျ ငတျမှတျခွငျးနဲ့သာ အဆုံးသတျသလို ကြှနျတျောတို့ဟာလညျးပဲ အခငျြးခငျြး မတ်ေတာထား၊ ကိုယျခငျြးစာတရား ရှထေ့ားပွီး ဘဝကို ဖွတျသနျးရငျ လောဘ၊ ဒေါသကငျးတဲ့ စိတျခမျြးသာတဲ့ ဘဝကို ရနိုငျပါလကျြ၊ ငါ့အတှကျ၊ ငါ့သားမယား အတှကျ၊ ငါမိသားစု အတှကျ၊ ငါကောငျးစားရေး အတှကျ စတဲ့ အတ်တရဲ့ ဇှနျးရှညျမြားနဲ့ စညျးစိမျခမျြးသာကို ခပျယူနကွေပွနျတယျ။
အဲဒီလို ခပျယူနကွေ ပမေယျ့လညျး လိုအငျဆန်ဒ ပွညျ့မွောကျခွငျးဆိုတဲ့ ခံတှငျးဝကို ဘယျတော့မှ ရောကျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ကိုယျ့ရဲ့လိုအငျဆန်ဒကွောငျ့သာ၊ ကိုယျငတျမှတျနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့တှဟော ငါ့အတှကျတငျ မဟုတျ တပါးသူအတှကျ ဆိုတဲ့ အခကျြကို ထညျ့သှငျး စဉျးစားမိတဲ့အခါ ကောငျးကငျဘုံက လူတှလေို တဦးနဲ့တဦး အပွနျအလှနျ ခှံ့ကြှေးလို့၊ ငါရသလို ငါအဆငျပွသေလို သူလညျး ရပါစဆေိုတဲ့ ကိုယျခငျြးစာစိတျမြိုး ၊ လူမြိုး၊ ဘာသာ မခှဲခွားတဲ့ ကွငျနာသနားမှုမြိုး ထားကွမယျ ဆိုရငျတော့ ကြှနျတျောတို့ဟာ ကောငျးကငျဘုံသားမြားလို့ ဆိုနိုငျမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
The purpose of human life is to serve, and to show compassion and the will to help others. ဆိုတဲ့စကားလို "လူ့ဘဝရဲ့ အဓိပ်ပါယျဟာ အလုပျအကြှေးပွုဖို့၊ အကွငျနာမတ်ေတာထားဖို့၊ အခွားသူတှကေို ကူညီရိုငျးပငျဖို့ပဲ ဖွဈတယျ" လို့ ဆိုလိုတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
တကယျတော့ တယောကျနဲ့တယောကျသာ အကွငျနာမတ်ေတာ ထားတတျကွမယျဆို ငရဲဘုံနဲ့တူတဲ့ ဆငျးရဲငတျမှတျခွငျးတှေ၊ စဈပှဲတှေ၊ မတရား အနိုငျကငျြ့ သတျဖွတျခွငျးတှေ ပြောကျဆုံးပွီး သာယာတဲ့ လူ့ဘောငျ၊ ကောငျးကငျဘုံနဲ့တူတဲ့ လူ့ဘောငျတခု ဖွဈလာမှာ မုခမြလှဲပါပဲ။
တခါတုန်းက အသက်အရွယ် အိုမင်းလှပြီဖြစ်တဲ့ အဖွားအိုတဦး ရှိပါသတဲ့။ အဖွားအိုဟာ တသက်တာလုံးမှာ စိတ်ထားဖြူစင်စွာနဲ့ သီလခိုင်မြဲစွာ အသက်ရှင် နေထိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ တရက်မှာတော့ အဖွားအိုဟာ သေအံ့မူးမူး အချိန်အခါကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသတဲ့။
အဲဒီလို အဖွားအို သေအံ့မူးမူး ဖြစ်နေဆဲ အချိန်အခါမှာ ရုတ်တရက် ဆိုသလိုပဲ သေမင်းတမန် နတ်သားဟာ အဖွားအိုအနီးမှာ ဘွားခနဲ ပေါ်လာပါသတဲ့။ ပြီးတဲ့အခါ အဖွားအိုကို ကြင်နာစွာကြည့်ပြီး ဒီလိုပြောခဲ့တယ်။
"အဘွား၊ အဘွားဟာ တသက်လုံး ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ နဲ့သာ ယဉ်ပါးခဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အဖွား တမလွန်ကို မကူးပြောင်းခင်စပ်ကြားမှာ ဒီဘဝအတွက် နောက်ဆုံး ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒကို ပြောပါ။ ဘာမဆို ကျွန်ုပ်ဖြည့်ဆည်းပေးပါ့မယ်"
အဲဒီစကားကို ကြားတဲ့အခါ အဖွားအိုက "ဒီလိုဆိုလည်း မောင်ရင်လေးရယ် အဖွားကို ကောင်းကင်ဘုံနဲ့၊ ငရဲဘုံကို လိုက်ပြစမ်းပါ၊ တရားထဲမှာသာ နာဖူးပေမယ့် အပြင်မှာ မြင်ဖူးချင်လို့ပါ" လို့ ပြန်ပြောလိုက် ပါသတဲ့။ အဲဒီလိုနဲ့ သေမင်းတမန် နတ်သားဟာ အဖွားအိုကို ခေါ်ဆောင်ပြီး ငရဲဘုံကို ဦးစွာ လာခဲ့ပါသတဲ့။
ငရဲဘုံကို အဖွားအို ရောက်တဲ့အခါ သေမင်းတမန် နတ်သားဟာ အဖွားအိုကို ခန်းမကြီးတခုကို ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီခန်းမကြီးမှာ ကြီးမားတဲ့ စားပွဲရှည်ကြီး တလုံးကို ချထားခဲ့တယ်။ အဲဒီစားပွဲပေါ်မှာတော့ အမျိုးမျိုးသော စားသောက်ဖွယ်ရာတွေ၊ အဖျော်ယမကာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေ ခဲ့တယ်။
စားပွဲ ပတ်ချာလည်မှာတော့ ပိန်လှီနေတဲ့ ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ ကလေး၊ လူကြီး အရွယ်စုံဟာ စားသောက်ဖို့အတွက် အငမ်းမရ ဖြစ်နေကြတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့ရဲ့လက်တွေ နေရာမှာ လက်ချောင်းတွေအစား လူတရပ်လောက် နီးနီး ရှည်လျားလှတဲ့ ဇွန်းတံတွေ ပေါက်နေကြတယ်။
သူတို့တွေဟာ စားသောက်ဖွယ်ရာတွေကို ဇွန်းနဲ့ခပ်လို့ ရပေမယ် ရှည်လျားလှတဲ့ ဇွန်းကြောင့် သူတို့ရဲ့ ပါးစပ်ကို ရောက်ရှိဖို့ မဖြစ်နိုင်ကိုလည်း အဖွားအိုက တွေ့လိုက်ရတယ်။ လူတွေဟာ အစားအသောက်ကို မြင်နေရပေမယ့် ငတ်မွတ်ခြင်းနဲ့သာ အဆုံးသတ် ငိုညည်းနေကြ ပြန်တယ်။
အဖွားအိုဟာ ငရဲဘုံရဲ့ ငတ်မွတ်ဆင်းရဲခြင်းကို မြင်တွေ့ပြီးတဲ့အခါ "ကောင်းကင်ဘုံကို လိုက်ပို့ပါတော့ သေမင်းတမန်နတ်သား" လို့ ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ သေမင်းတမန်နတ်သားဟာ အဖွားအိုကို ခေါ်ဆောင်ပြီး ကောင်းကင်ဘုံကို လိုက်လံ ပြသပြန်တယ်။
အဖွားအိုက "ကောင်းကင်ဘုံမှာတော့ ဇွန်းလက်တံတွေ ပေါက်မနေလောက်ပါဘူးနော်" လို့ မေးမြန်းခဲ့ ပြန်တယ်။ "ရောက်တဲ့အခါ ကြည့်လိုက်ပေါ့အဘွားရယ်" လို့ သေမင်းတမန် နတ်သားက ပြန်ပြောခဲ့တယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ အဘွားအိုဟာ ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ စားသောက်ခန်းမထဲကို ရောက်လာခဲ့ပြန်တယ်။ ကောင်းကင်ဘုံ စားသောက်ခန်းထဲ မှာလည်း ငရဲပြည်တုန်းကလိုပဲ ခမ်းနားတဲ့ ညစာစားပွဲကြီး ခင်းကျင်းထား ပြန်တယ်။ သူတို့ဟာ လက်ချောင်းတွေ ရှိနေကြပေမယ့်လည်း ဇွန်းအရှည်ကြီးတွေကို ကိုင်ဆောင်ထား ကြတယ်။
ဒါပေမယ့် ခြားနားတာ တခုကို အဖွားအို တွေ့လိုက်ရတယ်။ အဲဒါကတော့ ဇွန်းလက်တံ အရှည်ကြီးတွေ နဲ့ တယောက်နဲ့ တယောက် အပြန်အလှန် ခွံ့ကျွေးနေကြတာပဲ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ စားသောက်ရင်း၊ ရယ်မောရင်း၊ သီချင်းဆိုရင်း ပျော်ရွှင်ကြည်နူး နေကြတာပဲ ဖြစ်တယ်။
အဖွားအိုဟာ အဲဒီမြင်ကွင်းကို ကြည့်ရှုပြီး ဒီလိုပြောခဲ့တယ်။ "အိုး၊ သူတို့ဟာ တယောက်နဲ့တယောက် ကျွေးမွေးတာကို ကောင်းကောင်းလေ့လာ တတ်မြောက်နေပြီပဲ၊ ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ ငရဲဘုံရဲ့ကွာခြားချက်က တဦးနဲ့တဦး အပြန်အလှန် ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်ခြင်းပဲ"
နောက်တနေ့ မနက်မှာတော့ အဖွားအိုဟာ ကွယ်လွန်အနိစ္စ ရောက်ခဲ့တယ်။ သူဟာ အကြင်နာတရားရဲ့အရေးကြီးပုံကို သဘောပေါက်နားလည်သွားတာမို့ သူ့ရဲ့သွားရာလမ်းဟာ ကောင်းကင်ဘုံ ဖြစ်မှာတော့ သေချာနေခဲ့တယ်။
ဒီပုံပြင်လေးက ကျွန်တော်တို့ကို ပြောပြထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့သာ ရှင်သန်ခွင့် ရကြတဲ့ လူသားတွေပဲ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ ရှင်သန်နေကြရတဲ့ ဘဝမှာပဲ ရှင်နေလျက်နဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေကြောင့် ရှည်လျားတဲ့ ဇွန်းလက်တံတွေ ပေါက်နေကြသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒ အလှမ်း ကျယ်လာလေလေ လောဘဇွန်းတံဟာ ရှည်လျားလေလေ ဖြစ်နေကြပြန်တယ်။ အဲဒီလို ဇွန်းတံဟာ ရှည်လျားပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့အလိုပြည့်ခြင်း ခံတွင်းပေါက်ကို ဘယ်သောအခါမှ ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို ပုံပြင်လေးက ပြောပြနေပါတယ်။
ငရဲဘုံက လူတွေဟာ ဇွန်းလက်တံတွေနဲ့ အချင်းချင်း ခွံ့ကျွေးရင် ရနိုင်ပါလျက် ကိုယ်စားဖို့ကိုသာ အာရုံစိုက် ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ အတွက် ငတ်မွတ်ခြင်းနဲ့သာ အဆုံးသတ်သလို ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းပဲ အချင်းချင်း မေတ္တာထား၊ ကိုယ်ချင်းစာတရား ရှေ့ထားပြီး ဘဝကို ဖြတ်သန်းရင် လောဘ၊ ဒေါသကင်းတဲ့ စိတ်ချမ်းသာတဲ့ ဘဝကို ရနိုင်ပါလျက်၊ ငါ့အတွက်၊ ငါ့သားမယား အတွက်၊ ငါမိသားစု အတွက်၊ ငါကောင်းစားရေး အတွက် စတဲ့ အတ္တရဲ့ ဇွန်းရှည်များနဲ့ စည်းစိမ်ချမ်းသာကို ခပ်ယူနေကြပြန်တယ်။
အဲဒီလို ခပ်ယူနေကြ ပေမယ့်လည်း လိုအင်ဆန္ဒ ပြည့်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ ခံတွင်းဝကို ဘယ်တော့မှ ရောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒကြောင့်သာ၊ ကိုယ်ငတ်မွတ်နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ငါ့အတွက်တင် မဟုတ် တပါးသူအတွက် ဆိုတဲ့ အချက်ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားမိတဲ့အခါ ကောင်းကင်ဘုံက လူတွေလို တဦးနဲ့တဦး အပြန်အလှန် ခွံ့ကျွေးလို့၊ ငါရသလို ငါအဆင်ပြေသလို သူလည်း ရပါစေဆိုတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မျိုး ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ မခွဲခြားတဲ့ ကြင်နာသနားမှုမျိုး ထားကြမယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကောင်းကင်ဘုံသားများလို့ ဆိုနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The purpose of human life is to serve, and to show compassion and the will to help others. ဆိုတဲ့စကားလို "လူ့ဘဝရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဟာ အလုပ်အကျွေးပြုဖို့၊ အကြင်နာမေတ္တာထားဖို့၊ အခြားသူတွေကို ကူညီရိုင်းပင်ဖို့ပဲ ဖြစ်တယ်" လို့ ဆိုလိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ တယောက်နဲ့တယောက်သာ အကြင်နာမေတ္တာ ထားတတ်ကြမယ်ဆို ငရဲဘုံနဲ့တူတဲ့ ဆင်းရဲငတ်မွတ်ခြင်းတွေ၊ စစ်ပွဲတွေ၊ မတရား အနိုင်ကျင့် သတ်ဖြတ်ခြင်းတွေ ပျောက်ဆုံးပြီး သာယာတဲ့ လူ့ဘောင်၊ ကောင်းကင်ဘုံနဲ့တူတဲ့ လူ့ဘောင်တခု ဖြစ်လာမှာ မုချမလွဲပါပဲ။